Hide Pictures, Hide Photos & Videos, Gallery Vault APK Download for Android
ပင်မစာမျက်နှာ » personalization Apps ကပ » ရုပ်ပုံများ Hide, ဓာတ်ပုံများ & ဗီဒီယိုများ Hide, ပြခန်း Vault
ရုပ်ပုံများ Hide, ဓာတ်ပုံများ & ဗီဒီယိုများ Hide, ပြခန်း Vault APK ကို
ဓာတ်ပုံများ Hide, ဓါတ်ပုံတွေကိုဖုံးကွယ်, ပုဂ္ဂလိကပြခန်း Vault app ထဲမှာဗီဒီယိုများဖုံးကွယ်။
ရုပ်ပုံများ & ဗီဒီယိုများ Hide - Google Play တွင်အဆုံးစွန်ပုဂ္ဂလိကပြခန်း app ကို
ဓာတ်ပုံများ app ကို Hide - အားလုံးသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကဓာတ်ပုံများတစ် Vault ပြခန်းတွင်သိမ်းဆည်းထား။ ပုဂ္ဂလိကပြခန်းနှင့်လုံလုံခြုံခြုံဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ Hide မိုးတိမ်အတွက် backup လုပ်ထားသင့်ရဲ့ဒေတာကို။ မျိုးစုံ devices များအကြားပုဂ္ဂလိကကျောင်း data တွေကိုမျှဝေပါ။ လျှောက်လွှာအမှားတုမှအတု Crash ပေးတဲ့ dialog ကိုသုံးပါ။
ထိန်းချုပ်မှုကို ယူ. နံပါတ်တစ်ပုဂ္ဂလိက Vault ပြခန်း app ကိုအတူတကယ်ပုဂ္ဂလိကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းပစ္စယစောင့်ရှောက်လော့။
ဒီ app ကိရိယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီအခွင့်ပြုချက် "ကာကွယ်ဆေး Uninstall ကို" option ကို enable လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးဖယ်ရှားရန် option ကို activated လျှင်အဘယ်သူမျှမသင် မှလွဲ. app ကို uninstall လုပ်ဖို့နိုငျပါလိမျ့မညျ။
★ Vault ဓာတ်ပုံပြခန်း
★ပုဂ္ဂလိကပြခန်း: FotoX ပြခန်းတွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပုံများ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုသိမ်းထား။
★အတု Crash ပေးတဲ့ dialog သော့ဖွင့်။ သင့်ရဲ့ app ကိုပျက်ကျခဲ့သည်ဟုတူတဲ့။
★ FotoX မိုဃ်းတိမ်ကို (ပရီမီယံ) သင်လုံခြုံစွာမိုဃ်းတိမ်၌ရှိသမျှတို့ကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများသိုလှောင်ဖို့နဲ့မျိုးစုံ devices များအကြား data ကိုလွှဲပြောင်းရန်နိုင်ပါတယ်။
★ကြိုးစားခြင်းချိုး။ တစ်စုံတစ်ဦးကမှားယွင်းတဲ့ pin ကိုကုဒ်ရိုက်ထည့်အခါတိုင်း, မှားယွင်းတဲ့ပုံစံဖန်တီး, ဒါမှမဟုတ်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုပျက်ကွက်, FotoX app ကိုဒီကြိုးပမ်းမှုမှတ်တမ်းတင်သိုလှောင်ထားမည်။
Stealth Mode ကို★။ ဒီ option ကသင်လုံးဝသင့်ရဲ့ device ကိုအခြားသူများအားလျှောက်လွှာမမြင်ရတဲ့အောင်ထံမှ FotoX အိုင်ကွန်ဖယ်ရှားပစ်ရန်နိုင်ပါတယ်။
★အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေး။ ဒီ option ကို activated ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့အဘယ်သူမျှသင့်မှတပါး FotoX uninstall လုပ်ဖို့နိုငျပါလိမျ့မညျ။ ပုံမှန်ဖယ်ရှားရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိတ်ထားမည်။
★ Password ကို Recovery ကို။ သင်သည်သင်၏ pin ကိုကုဒ်သို့မဟုတ်ပုံစံမေ့လျော့သောအမှု၌သင်တို့ကိုအစဉ်အမြဲတည်ဆဲသော့ခတ် reset နှင့် FotoX app ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပြန်လည်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဖျောက်ရုပ်ပုံများ & ဗီဒီယိုများ အသုံးပြု. အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ဘာဂ်ပြုပြင်မှုများ & စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု။
ရုပ်ပုံများ Hide, ဓာတ်ပုံများ & ဗီဒီယိုများ Hide, ပြခန်း Vault
9.18 ကို MB
SMSROBOT, LTD (အော်တိုခေါ်ရန် Recorder, ကာလ Tracker)
AppLock Locker တွေ